Hey Twitter, Agbalịrị m Mgbasa ozi na Lee Ihe Mere | Martech Zone
Agụla m nyocha dị iche iche na mgbasa ozi Twitter. Ebe ọ bụ na ejighị m ya n'onwe m, echere m na ọ nwere ike ịba uru. Ọ ga-amasị m ịdọta ụfọdụ ndị ọzọ na akaụntụ teknụzụ Teknụzụ Twitter ma achọrọ m ịhụ ma ụfọdụ mgbasa ozi ga-enyere aka. Echere m na anaghị m achọpụta.
Hey @TwitterAds, agbalịrị m iso gị mefuo ego mana ị gaghị ekwe m
Ejiri m nlezianya nyochaa nhọrọ nzacha iji belata ndị na-ege m ntị. Ahọrọ m Marketing dị ka otu, tinye ụfọdụ isiokwu site na edemede anyị iji lekwasị anya, ọbụnakwa nye mmadụ iri na abụọ akaụntụ ndị ọzọ iji gbalịa ịdọta ndị na-eso ụzọ ha.
Mgbe m mechara atụmatụ ahụ, e nyere m ohere ịhọrọ otu Tweets m, ma ọ bụ wuo nke m. Achọrọ m ịme nke m. Ọzọ… Ejiri m oge dị ukwuu iji rụpụta ozi iji nwalee ma mara mma maka ya.
Na mgbe ahụ, m gbalịrị ibipụta Twitter Kaadị… mara njehie:
Nsogbu adighi, asim n'obi m. Ahụrụ m na enwere bọtịnụ nchekwa iji chekwaa mkpọsa gị n'elu aka nri. Ya mere, m pịa chekwaa na… mara njehie:
Amachaghị m ihe m ga-eme ugbu a. Enweghị m ike ịchekwa ọrụ niile m mere na-eche maka mkpọsa ahụ ma enweghị m ike ịchekwa ọrụ niile m rụrụ na okike.
Tags: Twittertwitter ad idamgbasa ozi twittermgbasa ozi twitterokike twitter adighitwitter ada
gShift: Ihe Omumu nke SaaS boardzọ Omume Kacha Mma
Augment na Virtual Adị Ga-A Ga-Commerce
Mee 20, 2016 na 3: 33 AM
Ị nọghị sọ gị! M na-agba ọsọ mgbasa ozi Twitter, mgbe ụfọdụ maka onwe m, ọkachasị maka ndị ahịa na ọ bụ n'ezie nnukwu nsogbu. Amara m na m na-aga n'iwe mgbe ụfọdụ. Ha kwesịrị imezi nke a ma ọ bụrụ na ha ga-akpata ego.